Ngomhla omnye oGqibeleleyo we-Wed, nge-20 kaJanuwari ka-2010 Fumana iSoftware ebaluleke kakhulu uze noZizo eHaiti | Plum emangalisayo
I-CopyPaste Pro, iClock, iWatermark, IMac, iindaba, kwama Press, yKey
Ngomhla omnye oGqibeleleyo we-Wed, nge-20 kaJanuwari ka-2010 Fumana iSoftware ebaluleke kakhulu uze noZizo eHaiti
UMHLA: ngoJanuwari 20, 2010
Thenga isoftware eyaziwayo yeMac- CopyPaste Pro, iClock Pro, iWatermark, iKey, KnowledgeMiner, MountWatcher, NetCheck kunye / okanye iiapps ze-iPhone- Kid Paint, Iphuli yeGalactic, iindleko kunye nexabiso lokuthenga lonke liya kuya koGqirha ngaphandle kweMida.
Kuzo zonke ezangoLwesithathu, nge-20 kaJanuwari, ka-2010 iSoftware kunye nePlum emangalisayo ziya kuba zinikela ngentengiso nganye yeMac, i-iPhone kunye nesoftware yeWindows kwiiGqirha ngaphandle kwemida.
Izixhobo zeMac zilapha: http: //www.scripttsoftware.com
Izixhobo ze-iPhone zilapha: https: //plumamazing.com
Ilula, fumana iMac, iWin kunye ne-software eyi-software eyimfuneko kuwe kwaye kwangaxeshanye uncede imizamo yokuhlangula eHaiti.
IPlum emangalisayo Software esekwe yinkampani yabucala enikezelwe kwi-iPhone, Mac, Windows kunye nezicelo zeselula. IPlum emangalisayo ngumboneleli wehlabathi wezicelo zeselfowuni kunye needeskitho ukusukela ngo-1995. Ngolwazi olongezelelweyo, nceda undwendwele